Ku dhiiran inaad ka shaqeyso warshadaha mustaqbalka
Qaar badan oo idinka mid ah ayaa raacday safarkan sahamineed ee warshadaha kalfadhigii ugu horreeyay ee MOOC-kan oo la bilaabay Abriil-tii hore waanan ku mahadsan nahay!
Kalfadhigan labaad ee MOOC, sidaas darteed waxaad ku farxi doontaa inaad ogaatid nooc ka sii kordhay oo had iyo jeer ujeeddadu tahay soo bandhigida warshadaha, iyo warshadaha mustaqbalka gaar ahaan wajiyada kala duwan iyo Fursadaha shaqada suurto gal.
Haddi aad tahay arday dugsi sare ah, arday jaamacadeed, arday, qof weyn oo mushahar qaata ama dib u tabobar, MOOC waxa ay hiigsanaysaa in ay fahan wanaagsan ka hesho qaybaha la soo bandhigay iyo ganacsiyada iyada oo hamiga ah in uu kaa caawiyoorienter gobolka'wargelin Thanks to set MOOCs, oo koorsadan ay qayb ka tahay, kaas oo loo yaqaan ProjetSUP.
Nuxurka lagu soo bandhigay koorsadan waxaa soo saaray kooxo waxbarid oo ka socda tacliinta sare oo ay iskaashanayaan Onisep. Markaa waxaad hubin kartaa in nuxurku yahay mid la isku halayn karo, oo ay abuureen khubaro ku xeel dheer arrimahaas.
MOOC Tani waa a raad-helid Kaas oo kaa caawin doona inaad si fiican u barato qaybta warshadaha, taas oo wali inta badan soo gudbisa fikrado xunxun oo ku xidhan caajisnimada, shaqooyinka aan soo jiidashada lahayn iyo ixtiraam la'aanta deegaanka. Qodobadan mudnaanta leh ayaa laga yaabaa inay u dhigmaan xaqiiqda waqti cayiman, laakiin waxaad si fiican u fahmi doontaa xaqiiqada maanta ee adduunka warshadaha oo aad si gaar ah u tixgeliso dhammaan rajada iyo fursadaha warshadaha ee berritoiyo tan adiga oo baranaya naftaada fikradda warshadaha mustaqbalka ama 4.0!
Waxaan ka jawaabi doonaa su'aalahaaga oo dhan: waa maxay warshaduhu? Maxaan uga jeednaa warshadaha mustaqbalka? Sideed uga shaqeysaa halkaas? Waa maxay xirfadaha kala duwan ee laga heli karo halkaas? Sidee ku helaysaa xirfadahan?
Ganacsiga warshadaha waa badan, waxa loogu talo galay qof walba, dumar, rag, qalin-jabin, mid aan qalin-jabin, yar iyo weynba, hal shay ayaa ka dhexeeya, waa. la taaban karo, iyo iyada oo loo marayo tababarka, waxay bixiyaan wax weyn fursadaha horumarineed. Shaqooyinkani waxay ku faanaan meel hal-abuurnimadaada ah oo haddii aad raadinayso inaad macno siiso xirfaddaada xirfadeed, waxaad timid meeshii saxda ahayd!
Ku dhiiran inaad ka shaqeyso warshadaha mustaqbalka Diisambar 17, 2021Tranquillus
socdaSax, ma aniga?
8 faa'iidooyin lama filaan ah oo ku jira barashada luqad cusub!
Qaybaha xirfadlayaasha ah iyo shabakadaha ganacsiga waxaa ka go'an heshiiska ka qaybgalka dhalinyarada
Sida loo isticmaalo Nidaamka io - Tababar Bilaash ah 2020
Bilaash: Aasaaska aasaasiga ah ee sameynta iyo qaabeynta miis Excel ah